१४३ नम्बरको गणितीय सूत्रअनुसारको भ्यालेन्टाइन डे | चितवन पोष्ट दैनिक
१४३ नम्बरको गणितीय सूत्रअनुसारको भ्यालेन्टाइन डे
२०७१ फाल्गुन २, शनिबार ०२:४८ गते
‘म तिमीलाई माया गर्छु’ भन्न वर्षौं लगाउनेहरु पनि अंग्रेजीमा सजिलैसित “आई लभ यू” भन्न सक्छन् । झन्, अब यो डिजिटल युगमा प्रेम पनि गणितीय फर्मुलाजस्तो भएको छ । त्यसैले, अबका प्रेमीहरु आई लभ यू भन्नुको साटो आई (१) लभ (४) यू (३) मा परिणत भएका छन् ।
प्रेम युवायुवतीबीच आँखा जुध्दा हुने रासायनिक प्रतिक्रियाले गणितीय स्वरुप लिएको छ । त्यसैले, १४३ नम्बरको बस राजमार्गमा हुइँकिँदै प्रेमपुरीको यात्रा गर्दैछ । बसभित्र युवायुवतीहरु एकअर्काको आँखामा डुबेर प्रेमलाई अभिव्यक्त गर्न आतुर देखिन्छन्् । तर, प्रेमपथमा जीवनभर एकअर्काको हात समातेर हिँड्नका लागि आपसमा विश्वास र त्याग हुनुपर्छ भन्ने कुरा यी यात्रीहरुले चटक्कै बिर्सेका छन् । मात्र दैहिक आकर्षणमा डुबेर त्यसैलाई प्रेम मान्नेहरुको आँखा तब खुल्दछ, जब कुनै ठूलो दुर्घटना भैसक्दछ । प्रेमलाई नाफा–नोक्सानको तराजुमा राखेर व्यापार गर्नेहरुले प्रेमको शाश्वत् स्वरुपलाई विकृत बनाइदिएका छन् । प्रेमलाई यसको संकुचित घेराबाट मुक्त नगरिएसम्म भ्यालेन्टाइन डेको कुनै अर्थ रहँदैन ।
शनिबार भ्यालेन्टाइन डे अर्थात् प्रेम दिवस, प्रेमलाई नै सबै कुरा मान्नेहरु आज १४३ नम्बरको बसमा चढेर प्रेमपुरीको यात्रा गर्न पाउँदा त्यसैत्यसै मख्खमख्ख परेका होलान् । हरेक वस्तुको व्यापारिक र व्यावसायिकीकरण भएको आजको समयमा प्रेमले पनि गणितीय आकार लिएको छ । अंग्रेजीमा प्रेमका लागि व्यक्त गरिने आई लभ यू लाई आधुनिक प्रेमीहरुले १४३ नम्बरमा परिणत गरेका छन् । अब यो सांकेतिक र गणितीय रुपमा प्रेम अभिव्यक्त गर्ने तरिका नजान्ने मान्छले खोइ के प्रेम गर्लान् र !
सन्त भ्यालेन्टाइनले तत्कालीन सम्राट् क्लाउडियसले सैनिकहरुलाई बिहा नगर्न दिएको निषेधाज्ञालाई चुनौती दिँदै सैनिकहरुले इच्छाएको युवतीसँग बिहा गरिदिए । तबदेखि उनै सन्त भ्यालेन्टाइनका नाममा प्रत्येक वर्ष फेब्रुअरी १४ का दिनलाई प्रेमदिवसका रुपमा विश्वभरिका प्रेमीहरुले मनाउने गर्दछन् । यो दिन मात्र प्रेमभावना व्यक्त गर्नका लागि कार्ड र फूलको अरबौँ रूपैयाँको व्यापार हुन्छ । यसका साथै दिने महँगो उपहार र चकलेटको पनि हिसाब गर्ने हो भने प्रेम गर्नु वा त्यसलाई व्यक्त गर्नु भनेको अब सस्तो रहेन । हरेक गल्ली र चोकमा फस्टाउँदै गएको प्रेम भलै सस्तो भइसकेको छ, तर त्यसलाई व्यक्त गर्ने साधनहरु भने सस्ता छैनन् ।
तत्कालीन अवस्थाअनुसार सैनिकहरुको चाहना बुझेर सन्त भ्यालेन्टाइनले युवायुवतीबीचको दैहिक आकर्षण र प्रेमलाई नै सर्वोपरि ठानेका थिए । प्रेम भन्ने कुरा दुई विपरीत लिंगीबीचको आकर्षणमा मात्र लुकेको हुन्छ भन्ने पाठ आजका सिनेमा र नाटकहरुले जसरी सिकाइरहेका छन्, त्यसले गर्दा व्यक्ति असामाजिक र एक्लो बन्दै गएको कटु सत्यलाई नकार्न सकिँदैन । पश्चिमी संस्कृतिलाई अन्धो भएर मान्नेहरु लुगा फेरेझैँ प्रेमीप्रेमिका फेर्नुमा शान सम्झिन्छन् । एउटा युवकको एकैपटकमा ५–७ जना युवतीसँग र युवतीको पनि एकैपटकमा ५–७ जना युवकसँग प्रेमचक्कर चल्नु अब कुनै नौलो कुरा होइन ।
सन्त कबिरले भनेका थिए– “प्रेम गली अति सांकरी जा मे दो न समाय ।’ तर, अहिलेका प्रेमीप्रेमिकाको हृदय यति विशाल छ कि त्यसमा जति पनि अटाउन सक्छन् । तर, कति समयका लागि, त्यो ठोकुवा भने कसैले गर्दैन । त्यसैले होला, अहिलेसम्म मुटु विशेषज्ञ वा चिकित्सकहरुले कसैको मुटुको शल्यक्रिया गरेपछि भनेका छैनन् कि त्यसमा कति र क–कसका लागि प्रेम थियो भनेर । प्रेमको सीधा सम्बन्ध मुटुसित हुन्छ भनेर प्रेमशास्त्रीहरु भन्छन्, तर मुटु भाँचिएर अर्थात् टुक्रिएर मर्नेहरुको संख्या नै संसारमा सबैभन्दा बढी छ ।
प्रेमको ण्वास्तविक सुरूवात घरबाट हुने गर्दछ । आमाको वात्सल्य र स्नेहको छाया अनि पिताले पाइला–पाइलामा गर्ने खबरदारी र मार्गनिर्देशन । त्यसैगरी, दिदी र दाजुले भाइ र बहिनीको भविष्यले राम्ररी आकार लेओस् भनेर गरेको चिन्ता भाइ र बहिनीले दिदी र दाजुको हात समातेर स्कुल जाँदा र आउँदा पाएको माया । हजुरआमा र हजुबुबाले आफ्ना नातिनातिनीप्रति देखाएको अगाध माया र उनीहरुको बालक्रीडाबाट पाएको सुखद अनुभूति, त्यसको कुनै वर्णन गर्न सकिँदैन । तर अपशोच ! अहिले यही मायाको अभाव छ र यो माया पाएकाहरुका लागि पनि यसको कुनै मह¤व छैन । छिमेकको पल्लो घरको झ्यालबाट बेलाबेलामा देखा पर्ने एक जोडी सुन्दर आँखालाई नियाल्दै र कलेजमा मन परेको केटा वा केटीलाई आफ्नो जालमा पार्न अनेक हावभाव गर्नमा नै बित्दछ, आजका युवाहरुको बढी समय । आजका युवाहरुको सूत्र वाक्य हो– कलेज गएपछि पढ्न आए पनि नआए पनि प्रेम गर्न भने जान्नैपर्दछ । प्रेम गर्न नआए पनि वा नजाने पनि दुई–चारवटा गर्लफ्रेन्ड र ब्वायफ्रेन्ड भने हुनु अनिवार्य छ । खाली समय बिताउनका लागि, एसएमएस गर्न र नेटमा च्याट गर्नका लागि नै भए पनि प्रेमको स्वाँङ त गर्नैप¥यो । नत्र भने, यत्रो पहाडजस्तो जीवन अफिसको फाइल बोक्दै बित्न सक्दछ । कहाँ रातो गुलाफको फूल लिएर आफूलाई मन परेको व्यक्तिलाई भेट्न जाने र उसको काखमा जीवन बिताउने चाहना र कहाँ हाकिमको आदेश र त्यही नकच्चरो फाइल । तर, जीवनमा सिनेमामा देखाएजस्तै सबै कुरा सजिलैसित पाइँदैन ।
विदेशमा परिवार प्रथा टुट्दै गएको छ । सानोमा साख्खे वा सौतेनी मातापिताको छत्रछायामा हुर्केको बच्चा १६ वर्षको किशोर हुनासाथ आफ्नो जिम्मेवारी आफैँ बोक्न र जीविकाको खोजीमा भौँतारिन थाल्छ । यस्तो परिस्थितिमा उसले जहाँबाट अलिकता सहानुभूति पाउँछ, त्यसैलाई प्रेम ठान्ने भूल गर्दछ । अझ सुन्दर विपरीत लिंगीतर्फको आफ्नो आकर्षणलाई त्याग्न सक्दैन र बारम्बार प्रेमको भ्रममा त्यसमा डुबुल्की मार्दछ । ऊ यसबीचमा थुप्रैपटक १४३ नम्बरको बसमा चढिसक्दछ र गन्तव्यमा पुग्नुभन्दा पहिले ओर्लिन पनि सक्छ । उसले कहाँ पाउनु मातापिता, दिदीबहिनी र दाजुभाइको जीवनपर्यन्तको पे्रम अनि कहाँ पाउनु हजुरआमा र हजुरबुबाको स्नेह र आशीर्वाद !
विदेशमा ती व्यक्तिहरु बिरलै पाइन्छन्, जो एउटा सम्पूर्ण प्रेमको परिधिभित्र हुर्केका हुन्छन् । तर, हाम्रोजस्तो पारिवारिक संरचना भएको देशमा एउटा बच्चा जन्मिनु परिवारका लागि मात्र नभएर छिमेक र समाजका लागि पनि खुशीको कुरा हो । घरमा प्रेमपूर्ण वातावरणमा हुर्केको व्यक्तिले बाहिर पनि गर्ने प्रेम वास्तविक नै हुन्छ । ऊ विपरीत लिंगीप्रति आकर्षित अवश्य हुन्छ, तर त्यो क्षणिक हुँदैंन । उसले पनि कसैलाई गहिरो प्रेम गर्छ– पूर्ण आशा, विश्वास र त्यागका साथ ।
प्रेमलाई गणितीय आधारमा हिसाबकिताब गरेर १४३ नम्बरको प्रेम गर्नेहरुले बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने प्रेम जाति, देशको सीमा, रुपरंग र पैसाको लेनदेनबाट टाढा हुन्छ । प्रेमले दिनमात्र जान्दछ, त्यो प्रेम सोह्र वर्षे आकर्षणमा मात्र टिकेको हँुदैंन । वृद्धाश्रममा जीवनका आशाहरुलाई तिलाञ्जली दिएर काल पर्खिरहेकाहरुका हृदयमा गएर प्रेम र आशाको सञ्चार गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, बालगृहमा आफ्नो अबोध बाल्यकाललाई आकार दिइरहेका बालबालिकाहरु पनि प्रे्रमका सच्चा पात्र हुन् । घरमै पनि आफ्ना मातापिता वा अन्यलाई सानो पुष्पगुच्छा वा उपहार दिएर यो दिनलाई साँच्चैको प्रेमदिवस बनाउन सकिन्छ । यदि हृदयमा प्रेम छ भने कुनै नक्कली नम्बर प्लेट भएको १४३ नम्बरको गन्तव्यहीन बसमा चढ्नुभन्दा आफ्नो प्यारो घरलाई नै प्रेम र स्नेहको निवास बनाउन सकिन्छ । प्रेम र स्नेहको कुनै रुपरंग, जात र नाता हुँदैंन । जसले आफूलाई प्रेम ग¥यो र आफ्ना वरिपरि रहेका व्यक्ति र प्रकृतिलाई प्रेम ग¥यो, त्यसले नै १४३ नबरको बसमा चढ्ने साँचो पनि पायो । त्यसपछि उसलाई यो कुराले केही फरक पार्दैन कि उसको बगलको सिटमा केटा वा केटी नभएर कुनै बूढाबूढी बसेका छन् । उसले त मात्र प्रेम गर्न जानेको छ, अनि त्यसलाई बाँड्न जानेको छ । ऊ चढेको बस कहीँकतै दुर्घटनाग्रस्त पनि हुँदैंन । के यस्तो बसमा हामी सबैले चढे हुँदैन ? पक्कै पनि त्यो प्रेमले जिउँदैमा शाश्वत् सुख र स्वर्गको अनुभूति गराउने छ । त्यसो भए चढौँ न त १४३ नम्बरको बसमा, सबै ईष्र्या र घृणालाई बिर्सेर ।